Ngamafama unobangela wokubukulana ngokobuzwe, batsho abaqhankqalazi : New Frame
Ngamafama unobangela wokubukulana ngokobuzwe, batsho abaqhankqalazi
Abasebenzi basezifama abaqhankqalazayo kwingingqi iSundays River Valley kwiphondo iMpuma Koloni bathi balwa ngokuchasene nemeko engentle abaphangela phantsi kwayo nethethelela abemi bamazwe angaphandle.
Umbutho wabahlali iSouth African National Civic Organisation (Sanco) neqonga labasebenzi beefama zale ngingqi iSundays River Valley Farm Workers’ Forum (SRVFWF), batyhola amafama ale ngingqi alima ngenjongo yokukurhweba ngokubangela ukubukulana kwabo ngokobuzwe, ngokuthi babethise ngoyaba ummiselo wemirholo yabo oyi-R23.19 ngeyure nokulanda abasebenzi kumazwe angaphandle ukuzakuvuna isitrasi ngemirholo ebuncinci kangange-R10 ngeyure.
Zivalwe ngci! iintsuku de zasixhenxe iidolophu iKirkwood neAddo kwingingqi yolimo lwesitrasi iSundays River Valley ngabasebenzi basezifama nabahlali. Banyanzelisa ngobuncinane obuziiponti ezilishumi elinantathu zeerandi (R30) ngeyure kuwo onke amashishini ale dolophu, ukonyuselwa emisebenzini nokusekwa kwengxowamali yomhlalaphantsi wabasebenzi, abasebenzi beli ababuninzi bungamashumi asixhenxe ekhulwini (70%) kwabangamashumi amathathu ekhulwini (30%) abasuka kumazwe angaphandle.
Ukuvalwa ngci! kwezi dolophu kuququzelelelwe yiSanco, gwayimbo olo lwaanqandwa yinkundla ngomhla wama-25 KuTshazimpunzi (Epreli) ukuba luqhube. Umbutho iSRVFWF wona uyazicebula kolu gwayimbo, ngelithi usezakuhlala phansi nabaqeshi kuxoxwe ngochatha kwimivuzo yabasebenzi bezi fama nokuba kumele olu gwayimbo lubeyinto yokugqibela. Nangona kunjalo, olu qhankqalazo luyaxhaswa ngabaninzi de kwavalwa namashishini amaninzi nezikolo. NgoMvulo wama-25 kuEpreli babemalunga namawaka amathathu abasebenzi nabahlali bale ngingqi abavingce iindlela eziphumayo nezingena kulo mmandla.
Emva kokuba aba baqhankqalazi betshise indawo uHabata ongumlimi wemifuno neziqhamo ahlalisa kuyo abasebenzi bakhe abayinzalelwane yamazwe angaphandle, olu gwayimbo lutyholwe njengolugxile ekubukuleni abemi bamazwe angaphandle ngokobuzwe. Noxa kunjalo iinkokheli zeSanco nezeSRVFWF ziyasiphika esi sityholo. Usihlalo weli qonga uVuyisile Sikani uthe iifama ezithile zesitrasi zezona zingunobangela wokubukulana kwabasebenzi bale ngingqi ngokobuzwe ngoba ziqeshe abasebenzi abasuka kumazwe asebumelwaneni boMzantsi Afrika ngobuninzi obumalunga nama-88 ekhulwini (88%) ngaphezu kwenani labemi beli.
USikani uthe, “Yenzeka njani eyokuba abahlali balapha banikwe i-12 ekhulwini (12%) kuphela lemisebenzi? Ezi fama zinkulu kule ngingqi zenza lo nto kanye kwaye zizo ezi zibangela ukubukulana kwabasebenzi ngokobuzwe. Bayazi ngqo! eyokuba abasebenzi bazakulwela esi sonka basiphosa phakathi kwabo.”
Iqela labasebenzi abayinzalelwane yeli nabayeyaseZimbabwe liyaziphika izityholo zokubukulana ngokobuzwe. Omnye waba basebenzi uthe, “Simnye apha. Njengokuba ubona nawe, silwa sibambene. Eyona ngxaki apha ngamafama atyala iyantlukwano phakathi kwethu ngokuthuthela apha abasebenzi ababasusa kwamanye amazwe, babahlawule iipont’ ezintlanu (R10) ngeyure. Lo nto iwenza nzima kakhulu umzabalazo wethu.”
NgoMvulo abasebenzi nabahlali baseMoses Mabhida eKirkwood bavale zonke iindlela ezingena kule lokishi ngamasebe abawophule kwimithi yesitrasi yefama esebumelwaneni. Oonogada beenkampani zabucala bebefole kwintaba emelene nabo, bedubula abaqhankqalazi ngeembumbulu zerabha.
Uninzi lwabasebenzi abebeqhankqalaza olungakhange lufunekukhankanywa amagama, luthi amafama ale ngingqi anoluhlu lwabasebenzi abaqhankqalazayo okanye abazibandakanye neemanyano zabasebenzi kwaye awazukuphinda abaqeshe kwakhona.
Zajik’ izinto, kwaf’ abantu
Abasebenzi abali-14 abangazibandakanyiyo kolu gwayimbo bathe unogada udubule ugxa wabo entloko ngembumbulu yokwenyani. Bebengungele ngomothuko phezu kwegazi lakhe emva kokuthathwa kwakhe ukusiwa esibhedlele. Lo nogada, nongavumanga ukuzichaza igama, uyaziphika ezi zityholo, uthi lo msebenzi uchanwe lilitye eligityiselwe ngomnye wabaqhankqalazi. USikani ungqinile ukuba omnye wabasebenzi ogama linguFergus, nolilungu leSRVFWF ubhubhe ngokuhlwa kwangoMvulo ngenxa yomonzakalo. UBenito Moses onama-35 iminyaka ubudala, nokwangumsebenzi kwezi fama, yena ubhubhele esibhedlele.
Umsebenzi onama-23 iminyaka ubudala ongummi waseMozambique ubesopha ecaleni nasengalweni ngenxa yenxeba lembumbulu yerabha, ngelixa abanye abasebenzi bebeqokelela amaqokobhe eembumbulu zerabha nezokwenyani njengobungqina bohlobo lweembumbulu olusetyenziswe kubo. Iqela labasebenzi abayinzalelwane yeli nabasuka kumazwe angaphandle likwathe umsebenzi onama-33 iminyaka ubudala, nongummi waseMalawi, ubalekiselwe kwisibhedlele iLivingstone eGqeberha emva kokudutyulwa entloko.
Omnye umsebenzi uthe, “Sicaphuke kakhulu ngoku. Bayasidubula. Sonke siyopha.”
USikani ubalule uHabata njengoyena nobangela wolu qhankqalazo. UHabata usebenza umhlaba ongangeehektare ezili-1 700 zemithi yesitrasi, imifuno nevatala kumaphondo iMpuma neNtshona Koloni, kwaye unazo nezinye iihektare ezingama-300 eLe Grand Chasseur Wine Estate kwingingqi yeWinelands. Ishishini lakhe liphunyezwe ngamaqumrhu alishumi ajongene nolawulo lwentengiso yezolimo kweli nakumazwe ase-Europe.
USikani utyhola uHabata ngokwehlisela abasebenzi abasisigxina KweyoKwindla (Matshi) kuba bezimanye nemanyano yabasebenzi iAgricultural Food and Allied Democratic Workers Union. Uye emva koko wonyusela abasebenzi abangesosigxina iendaweni yabo.
Ngomhla wama-24 kuMatshi imibutho iSRVFWF ne-Agricultural and Allied Industries Association yaadibana ngethemba lokuguqula isigqibo sokwehliselwa kwaba basebenzi babini. Le mibutho yaaxelelwa ukuba uHabata uzakuyiphendula kwisithuba seentsuku ezine, utshilo uSikani. Uthi noxa kunjalo, kwathi emva kosuku, eli qumrhu lamthumelela i-imeyil emazisa ngesilumkiso seSRVFWF “soqhankqalazo lwabasebenzi”.
USikani waleke ngelithi “yonke le nkquleqhu iqwalwe nguHabata. Bangamhlaza njani umphathi osisigxina, nabathuqhubi beeteletele ngokubanika iingxowa nezikere, babaxelele ukuba mabayokuvuna iilamuni namaorenji, bakugqiba bonyusele abasebenzi abangesosigxina? Asiloxesha lengcinezelo eli apho abasebenzi bebephethwe ngolo hlobo. Akunyamezeleki, kodwa siyiSRVFWF sizakugcin’ ucwangco.
UHabata khange aziphendule iivoice mail neembalelwano esimthumelele zona.
USimon Radebe usandulakuchanwa yimbumbulu yerabha endlebeni uthe ubomi bunzima kakhulu kubasebenzi basezifama. Uthi, “usebenze kwifama enye eminyaka eli-15, kodwa akakonyuselwa. Umfana umana ukwenza isithembiso angazigciniyo. Ndirhola i-R1 200 rhoqo! ngeveki yesibini ze umqeshi atsale i-R300 yokusithutha kumntu ngamnye.” URadebe uyibalule neyokuba kolu thutho, abasebenzi bakhwela ngemva kwisigadla esigcweleyo.
Imithi eyophukileyo yesitrasi namaxolo ayo agcwele endleleni, ngelixa abasebenzi bezi fama bezityela kuyo ngoku bengaqhelanga kutya kuyo. Omnye wabo uthe, “Asizityi nokuzitya ezi ziqhamo. Ukuba ukhe watya ilamuni enye nje xa kupakishwa, nokuba uyagula, uyagxothwa.”
Ngomhla wama-25 kuEpreli inkundla ephakamileyo eGqeberha ikhuphe isithintelo esinqanda iinkokheli zeSanco nabasebenzi basezifama abaqhankqalazayo ekubeni basondele kumgama oziimitha ezingama-500 phakathi kwabo neefama eziliqela kwingingqi iSundays River Valley, kodwa abasebenzi bona bathi bazakuqhuba nokuvala iindlela ezingena kule ngingqi de izinyanzeliso zabo zinanzwe.
IKapteni yamapolisa uM Fivas ungqinile ukuba “kukho umsebenzi owonzakele ngokumasikizi entloko”, kodwa ayabinakho ukungqina ukuba udutyulwe ngunogada kusini na. Uthe akanakho ukungqina ngohlobo lweembumbulu olusetyenziswa ngaba nogada. Utsho esaleka ngelithi amapolisa ebebeke nje imeko phantsi kweliso elibukhali, exhobe ngeembumbulu zerabha neziqhushumbisi zepepile kuphela.
Uqhankqalazo olukumila kunje kule ngingqi yeSundays River Valley lwalungonyaka ka-2018 ngethuba abasebenzi bezi fama bephumelela kwiingxoxo zokonyuswa kwemivuzo yabo ukuya kwi-R20 ngeyure, berhola ngaphezu kommiselo owawuyi-R18 ngeyure ngelo xesha. Owayesakubangumphathiswa wezophuhliso lwezolimo ephondweni ngelo xesha uXolile Nqatha, waamemelela amafama ekubeni ayeke lo mkhuba wokuqesha abemi bamazwe angaphandle ngemirholo emincinci kunaleyo ingummiselo kweli candelo.